Slackware 14.1: Xfce အတွက် SLiM ကို Install လုပ်ခြင်း Linux မှ
Slackware 14.1: Xfce 4.10 အတွက် SLiM ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
ဖြစ်စဉ် တပ်ဆင် de ကွမ်းခြံကုန်း အတွင်း ပျင်းရိ 14.1 ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားဖြန့်ဝေမှုများတွင်ပြုလုပ်မည့်အရာနှင့်အလွန်ကွာခြားသည်မဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားတွင်စာရွက်စာတမ်းများမရှိခြင်းကြောင့်ဗဟုသုတနည်းသောသို့မဟုတ်အသစ်ရောက်ရှိလာသောသူများအတွက်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောကတိက ၀ တ်တစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရှင်းသောအဆင့်များဖြင့်လုပ်ဆောင်ရမည်။
သင်အကြိုက်ဆုံးစာသားတည်းဖြတ်သူကိုသင်သုံးနိုင်သည်ကိုသတိရပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိစ္စအတွက်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုမည် vim.
1. ငါတို့ install လုပ်တယ် ကနေ SLIM Slackbuilds များ၊ Como အမြစ်.
၂ ဖိုင်ကို / etc / inittab ။
ကျနော်တို့ကိုရှာခြင်း y ကျနော်တို့မှတ်ချက်ချသည် မျဉ်းကြောင်း "x1: 4: respawn: /etc/rc.d/rc.4»သင်္ကေတရှေ့ဆက် #. ချက်ချင်း ငါတို့ပေါင်းထည့် မျဉ်းကြောင်း "x1: 4: respawn: / usr / bin / slim> & / dev / null»
3. ကျနော်တို့ execute (သာမန်အသုံးပြုသူအနေဖြင့်) «xwmconfig»
Y ငါတို့ရွေး ရွေးချယ်စရာ "xinitrc.xfce»
နောက်ထပ် ado မရှိဘဲ, က၏ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပါတယ် တပ်ဆင်အဆိုပါများအတွက် configuration များ နှင့်ညှိ ကွမ်းခြံကုန်း အင်တာနက်ပေါ်မှာသတင်းအချက်အလက်တွေအများကြီးရှိတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အသုံးပြုသူကိုအထူး ကလောင် သင်၏မှတ်ချက်များတွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆောင်းပါးကိုပိုမိုရိုးရှင်းသောပုံစံကိုပေးသည့်အတွက်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Slackware 14.1: Xfce 4.10 အတွက် SLiM ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
အရမ်းကောင်းတယ်၊ ငါပြောရမယ်၊ တခြား distros တွေမှာနည်းနည်းပိုလွယ်တယ် :)
Slackware ၏ထူးခြားချက်များမှာ .xinitrc အတွက်ကုဒ်သည်ဥပမာ KDE သို့မဟုတ် Openbox နှင့်အသုံးပြုလိုပါကအနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ သို့သော်ဤတစ်ကြိမ်တွင် Xfce အတွက်သာနေရာချရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်၊ ယခု မှစ၍ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမည် အခြား desktop ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့် windows ၏မန်နေဂျာများ။
ဟုတ်သည်၊ သူငယ်ချင်း၊ လိုင်းများစွာနှင့်နည်းလမ်းသည်အလွန် "မှီနေခြင်း" ဖြစ်သည်။ FreeBSD တွင် slackware များသည်လိုင်းများစွာကိုမွမ်းမံသင့်သည်၊ အသုံးမ ၀ င်ပါ၊ ငါ BSD ကိုသုံးသည်၊ ငါလုပ်သမျှအရာအားလုံးကိုလုပ်သည်။ သို့သော်ဤနည်းလမ်းနှင့်မတူပါ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း၊ လုံခြုံစိတ်ချရအောင်လုပ်ထားသင့်သည်။
ငါပါးလွှာ install လုပ်တဲ့အခါ slackbuild "README.slackware" ယူလာသည့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်သာ၎င်းကို install လုပ်ခဲ့သည်မှာသတိရစရာဖြစ်သည်။ ဒီနေ့အထိပါးလွှာတာနဲ့ကျွန်တော်မှာဘာပြproblemsနာမှမရှိဘူး။ ထူးဆန်းတယ်
အလွန်ကောင်းသော post ကို
Slackware အပေါ် SLiM အကြောင်းကိုအလွန်ကောင်းသော post ကို။ ငါလုပ်နိုင်မလားကြည့်ရအောင်၊ ဒါပေမယ့် Slackware ကို Alien လိုမျိုး backport ကိုသုံးပြီး compile မလုပ်ချင်တဲ့ပျင်းရိသူတွေအတွက်သုံးပါတယ်။
Slack နှင့်ပတ်သက်သောသူ၏ဆောင်းပါးများသည်ငါတို့အား slackers များအတွက်မဖြစ်မနေရည်ညွှန်းသည်။ သူသည်ဤဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်လည်းကူညီသည်။ ၎င်းသည်သေချာသည်အကောင်းဆုံးနှင့်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ပုံမှန် desktop ကိုရွေးချယ်ရန် xwmconfig ကိုသာတပ်ဆင်ထားပြီးတပ်ဆင်ထားသည့် desktop ပေါ်ရှိ screen တစ်ခုကိုပြလိမ့်မည်။ .xinitrc ဖိုင်ကိုကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည် Slackware တွင် slim ကိုသုံးပါသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုကွဲပြားခြားနားစွာကျွန်ုပ်ပြုပြင်သည်၊ ကျွန်ုပ် / etc / inittab ဖိုင်တွင်လိုင်းကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း
# Runlevel4သည် X အတွက် display manager ကို run ရန် /etc/rc.d/rc.4 ကိုစတင်သည်။
# Display မန်နေဂျာများကိုဤအစီအစဉ်တွင်ပိုမိုနှစ်သက်သည် - gdm, kdm, xdm
မင်းလုံးဝမှန်ပါတယ်၊ ငါပြောတာတွေကိုအတည်ပြုဖို့အခွင့်အရေးပဲရှိတော့တယ်၊ ဒါကအများကြီးပိုလွယ်ခဲ့တယ်။
ငါ entry ကိုတည်းဖြတ်ရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ် ...
ကျေးဇူးပြုပြီး Slackware အကြောင်းဆက်ပြောပါ၊ ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်စီစဉ်ထားပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားများစွာကူညီလိမ့်မည်။
HDMagazine # 11 ဤတွင် (နှင့်ဖြစ်ရန် # 10 ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သည်) ။ [အသစ်ပြုပြင်သည်]